Xog: Qorshe la doonayo in lagu qiyaano gobolka Shabeelaha Dhexe oo Muqdisho ka socdo (Aqri) - Caasimada Online
Home Warar Xog: Qorshe la doonayo in lagu qiyaano gobolka Shabeelaha Dhexe oo Muqdisho...
Xog: Qorshe la doonayo in lagu qiyaano gobolka Shabeelaha Dhexe oo Muqdisho ka socdo (Aqri)
Muqdisho (Caasimada Online) – Iyadoo labo maalin ka hor magaalada Muqdisho lagu saxiixay hishiis dhigaya in maamul mideysan loo sameeyo gobolada Shabeelaha Dhexe iyo Hiiraan ayaa waxaa soo baxaya qorshe aan wanaagsan oo la doonayo in lagu afgambiyo beelaha Shabeelaha DHexe.
Waxaa soo baxaya warar sheegaya in la doonayo in shirka lagu qabto magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, sidoo kala shaki weyn la geliyo caasimada maamulkan cusub iyo cidda noqoneyso madaxweynaha labada maamul.
“Caasimada , Halka shirka lagu qabanayo iyo madaxweynaha waxaa Xasan Sheikh iyo wasiirka arimaha gudaha la doonayaan in la isku siiyo Gobolka Hiiraan, mana suurto galeyso arintaasi”sidaasi waxaa yiri mid kamid ah dadka wada qaban qaabada dhismaha maamulka Hiiraan & Shabeelaha Dhexe.
Waxaa la weydiiyay su’aal ku aadaneyd qaabka ay sidaasi ku dhici karto?
“Waxaa la doonayaa in labo magaalo oo Shabeelaha Dhexe ah iyo labo magaalo oo Hiiraan loo codeeyo halka caasimada noqoneyso, waxaana dhaqaalo la siin rabaa ergooyinka codeynaya, si caasimada loo siiyo Hiiraan, waxaa kaloo la rabaa in madaxweynaha sidaasi oo kale dhaqaalo lagu bixiyo oo cid kastaa isi sharaxdo, Xasan Sheikh Cidiisa ayuu doonayaa inuu Hiiraan ahaan ugu Hiiliyo.
Waxaa durba soo baxay dhaliilo xoogan oo loo jeedinayo dadka kasoo jeeda Shabeelaha Dhexe ee shirkaasi wax ka saxiixay oo uu ugu horeeyo Cali Guudlaawe gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Dhexe, kaasi oo aan ka fiirsaneynin aayaha Shabeelaha DHexe iyo hagardaamada lala damacsan yahay.